Oraahda Joseph Stiglitz: 25ka weedhood ee ugu wanaagsan Stiglitz iyo yaa | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Joseph Stiglitz Xigasho
Casudi casals | | Dhaqaalaha guud
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la akhriyo, wax la barto oo la barto waxyaabo cusub, gaar ahaan adduunka dhaqaalaha. Si aad natiijooyin wanaagsan uga hesho suuqa saamiyada, waa inaad la socotaa dhacdooyinka ugu waaweyn oo aad urursataa xigmad. Taasi waa sababta ay waxtar badan u leedahay in la ogaado fikirka dhaqaaleyahannada waaweyn. Si kastaba ha noqotee, waxay caan ku yihiin nasiibka ay u yimaadeen inay ku mahadisaan aqoontooda dhaqaale iyo dareenkooda. Oraahda Joseph Stiglitz, tusaale ahaan, waxay ka kooban yihiin aqoon badan oo ku saabsan dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka iyo caalamiyeynta.
Qodobkaan waxaan ku arki doonnaa 25ka ugu fiican Joseph Stiglitz. Waxaan sidoo kale ka hadli doonnaa waa kuma dhaqaaleyahankan, Abaalmarinta Nobel Prize Pioneer ee Dhaqaalaha Macluumaadka. Ma rabtaa inaad ogaato waxaani waa? Waxaan kugula talinayaa inaad sii wadato akhriska.
1 25ka weedhood ee ugu fiican Joseph Stiglitz
2 Waa kuma Stiglitz?
2.1 Dhaqaalaha warfaafinta
25ka weedhood ee ugu fiican Joseph Stiglitz
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, weedhaha Joseph Stiglitz waxay noqon karaan kuwa wargelin badan leh oo wax baraya. Marka xigta waxaan arki doonaa 25 xigashooyinka ugu wanaagsan ee dhaqaaleyahan sare.
"Muddada fog, isbeddelada ugu muhiimsan ee loo baahan yahay si looga dhigo shaqo caalamiyeynta waa dib-u-habeyn lagu yareynayo dhimista dimuqraadiyadda."
Marka laga hadlayo qiime dhaca doolarka iyo keydka: "Laakiin halkan waa halka ay Shiinaha iyo Japan dhibaato ku leeyihiin: waxay uruursadaan lacago aad u tiro badan oo haddii, ay doonayaan inay iibiyaan tiro aad u badan oo iyaga ka mid ah, uu doolarku qiimahoodu hoos u dhacayo, taas oo keeneysa khasaare kuwa weli baxay. "
Saboolnimadu waxay lamid tahay inaad xabsi ku dhex nooshahay, addoonsiga oo aad ku rajo weyn tahay inaad xor noqoto.
Muwaadiniinta dalalka hodanka ku ah kheyraadka dabiiciga, iyo musuqmaasuqa: "Xitaa iyaga uma tixgelin karaan inay yihiin lacagtooda, sida ay u arki lahaayeen haddii ay dowladda ku maalgelinayaan canshuuraha dakhligooda adag ee ay shaqaysteen."
"Sababta gacanta aan la arki karin inta badan u muuqato wax aan la arki karin ayaa ah in inta badan aysan jirin."
Boqolkiiba boqol ee ugu sareeya waxay leeyihiin guryaha ugufiican, goobaha waxbarasho ee ugufiican, dhakhaatiirta ugufiican, iyo qaab nololeedka ugufiican, laakiin waxaa jira hal shay oo aysan lacagtu umuuqanin inay iibsadeen: fahamka inay aayahooda laxiriirayaan sida 99-ka kale boqolkiiba boqol ayaa ku nool. Taariikhda oo dhan, tani waa wax boqolkiiba boqol ugu sarreeya aakhirka ay bartaan. Goor dambe
Countries Wadamada soo koraya waxaa inta badan lagu qabtaa laba ikhtiyaar oo aan fiicnayn: joojinta lacagaha, taas oo keenaysa cabsi laga qabo burburka dhaqaalaha, ama aqbalida gargaarka (amaahda), taas oo keenaysa luminta madax-bannaanida dhaqaale.
Waa munaafaqnimo in laga dhigo in la caawiyo dalalka aan horumarsaneyn iyadoo lagu qasbayo inay suuqyadooda u furaan badeecadaha dalalka warshadaha horumaray isla mar ahaantaana ay ilaashadaan suuqyadooda maxaa yeelay waxay ka dhigayaan kuwa hodanka ah inay noqdaan kuwa taajir ah iyo kuwa saboolka ah oo faqiir ah.
"Waxa walwalka leh ayaa ah in caalamiyeynta ay soo saarayso waddamo hodan ah oo ay ku nool yihiin dad sabool ah."
Ine Sinaan la'aanta sii kordhaysa ayaa xumaanaysa kalsoonida; waxay leedahay saameyn dhaqaale oo la mid ah tan dareeraha caalamiga ah. Abuur adduun dhaqaale oo xitaa kuwa guuleysta ay taxaddaraan. Kuwa khasaarayna ... Meherad kasta, xiriir kasta oo lala yeesho madax, shirkad ama xafiis shaqaale, waxay arkayaan gacanta qof doonaya inuu ka faa'iideysto. "
Technologies Teknolojiyadaha cusub (oo lagu xoojiyay xeerarka cusub ee ganacsiga) waxay xoojinayaan awoodda suuqa ee shirkadaha waaweyn iyo kuwa xoogga leh, sida Microsoft, oo dhammaantood ka socda dunida horumartay; Markii ugu horraysay, warshad caalami ah oo muhiim ah, waxaa ku jira monopolist-ka adduunka ku dhow. "
Policies Siyaasadahan suuqa xorta ahi waligood kuma salaysnayn aasaas adag oo aasaasi iyo aragti ahaaneed, in kasta oo inbadan oo siyaasadahaas ka mid ah horay loo sii riixayay, aqoonyahanno ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa sharraxay xaddidaadda suuqyada, tusaale ahaan marka macluumaadku aanu dhammaystirnayn, taasi waa, had iyo jeer.
„Ma jiro qof keligiis guuleysta. Waxaa jira dad fara badan oo caqli badan, howlkar ah oo firfircoon oo ku nool wadamada soo koraya oo ku haray saboolnimada, sababtuna ma ahan xirfado la'aan, ama isku day adag oo ku filan, laakiin waxay ka shaqeeyaan dhaqaalaha oo si liidata u shaqeynaya. "
Taariikhda oo dhan, dhaqaalaha soo maray waa kuwa heshiisyada lagu shaabadeeyo gacan-qaad. Kalsooni la'aan, macaamil ganacsi oo ku saleysan is afgarad in faahfaahinta ka sii murugsan ee gadaal laga caddeeyo ayan hadda suurtagal ahayn. Kalsooni la'aan, kaqeybgale kastaa wuxuu eegay hareeraha si uu u arko sida iyo goorta ay wada-hadlayaashu khiyaanayn doonaan. "
“Qeyb ahaan, ganacsiga xorta ah ma uusan shaqeynin maxaa yeelay iskuma aanan dayin: heshiisyadii ganacsiga ee hore ma ahan kuwa xor iyo cadaalad midna. Waxay ahaayeen kuwo aan isku dheelitirnayn, suuqyo ka furaya waddamada soo koraya wax soo saarka waddamada warshadaha horumaray iyada oo aan la is-weydaarsi guud lahayn.
Qiimaha shaqo la'aantu ku qabato shaqaalaha waa mid aad u weyn oo ay adag tahay in la qaado. Shaqo ka wanaagsan ayaa jirta oo mushaharkeedu hoos u dhacay marka loo eego dhab ahaan boqolkiiba boqol dhibco marka loo eego midna.
Halkii cadaalad laga wada heli lahaa, waxaan u xuleyneynaa nidaamka cadaalada kuwa bixin kara. Waxaan leenahay bangiyo aan weynayn oo keliya inay fashilmaan, laakiin aad u weyn oo lala xisaabtami karo. «
"Horumarku wuxuu ku saabsan yahay in nolosha dadka wax laga beddelo, ma ahan oo keliya in dhaqaalaha wax laga beddelo."
Teachers Macallimiintii ugu fiicnayd wali waxbay ku barayeen qaab Socratic ah, iyagoo su'aalo weydiinaya, jawaabahana kaga jawaabaya su'aal kale. Dhammaan koorsooyinkeenna, waxaa nala baray in waxa ugu muhiimsan ay ahayd weydiinta su'aasha saxda ah; anigoo su aasha si fiican u weydiyay, ka jawaabisteeda inta badan waxay ahayd arin sahlan.
Burburka Wall Street waa suuq geynta aasaaskii wixii dumay darbigii Berlin u ahaa shuuciyadda. "
Habaarka kheyraadka dabiiciga ah aayaha ma ahan waa xulasho Ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga waa qeyb muhiim ah oo maanta ka mid ah caalamiyeynta, siyaabaha qaarna, guul darrooyinka dalalka soo koraya ee hodanka ku ah kheyraadka ayaa astaan ​​u ah guul darrooyinka caalamiga ah. '
Markaad aragto dhaqaale taas oo ah, siyaabo badan, xitaa ka duwan ta khibraddii carruurnimada, waxay gacan ka geysaneysaa in la caddeeyo dhibaatooyinka: qofku deegaankiisa qofku wuxuu ku qaataa waxyaabo badan oo aan la aqbali karin, isagoo aan weydiinin sababta ay wax u yihiin sida ay yihiin.
Teachers Macallimiintaydu way i caawiyeen oo i dhiirrigeliyeen; laakiin masuuliyadda barashada aniga ayaa la ii daayay. "
"Haddii xasilloonida iyo wax ku oolku u baahan yihiin inay jiraan suuqyo si aan dhammaad lahayn mustaqbalka u sii fiday, oo suuqyadani si cad u jirin, maxaan dammaanad ka haysannaa xasilloonida iyo waxtarka nidaamka hanti-goosiga
Bangiga Adduunka, waxaan indhaheyga ku arkay saameynta xun ee ay dunidan ku yeelan karto dalalka soo koraya, gaar ahaanna kuwa saboolka ah ee dalalkaas.
Waa kuma Stiglitz?
Hadda oo aan ognahay weedhihii ugu fiicnaa ee Joseph Stiglitz, aan wax yar ka hadalno cidda uu ahaa dhaqaaleyahankan caanka ah. 1976 wuxuu ka qalin jabiyay MIT (Massachusetts Institute of Technology) afar sano kadibna wuxuu kursi ka helay Yale. La ogeysiiyay inuu ahaa guuleystaha abaalmarinta Nobel Prize ee Dhaqaalaha haddana waa Professor dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee Jaamacadda Columbia.
Intaa waxaa dheer, Joseph Stiglitz wuxuu xubin ka ahaa Golaha La-taliyayaasha Dhaqaalaha ee Madaxweyne Clinton laftiisa. Sidoo kale waa in la ogaadaa inuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Bangiga Aduunka intii u dhaxeysay 1997 iyo 2000. Halkaas ayey ahayd markii uu indhihiisa ku arkay baaxadda saamaynta ba'an ee ay ku yeelan karto adduun-weynaha soo koraya.
Xigasho Robert Kiyosaki
Xaqiiqda kale ee ay tahay in laga xuso dhaqaaleyahankan weyn ayaa ah taas Wuxuu ka mid yahay dadka masuulka ka ah xeerarka ka jira dhaqaalaha maanta jira. Taasna kaliya maahan, laakiin sidoo kale waxay horudhac u tahay dhaqaalaha macluumaadka. Aaggan, Joseph Stiglitz wuxuu si isdaba joog ah u soo saaraa daraasado la xiriira cilladaha suuqa oo asalkoodu la xiriiro asymmetries macluumaadka. Sidan oo kale, Stiglitz wuxuu awood u yeeshay inuu hago siyaasadaha faragelinta ee waddamada horumaray ee waaweyn.
Wuxuu kaloo qoray buug la yiraahdo "The Malaise in Globalisation." Tan waxaa lagu tarjumay in ka badan labaatan luqadood waxayna ku guuleysatay inay noqoto iibgeeyaha ugu fiican dhammaan meelihii lagu daabacay.
Dhaqaalaha macluumaadka waa laan waxbarta sida nidaamyada macluumaadka iyo macluumaadka laftiisu u saamayn ku yeelan karaan dhaqaalaha iyo go’aamada laga gaadhay. Macluumaadku wuxuu leeyahay astaamo gaar ah oo adkeeya qaar badan oo ka mid ah aragtiyaha dhaqaale ee caadiga ah:
Way fududahay in la abuuro, laakiin taa badalkeeda way adag tahay in la rumaysto ama la aamino.
Faafintiisu waa fududahay, laakiin xakamaynta ayaa durba xoogaa ka sii dhib badan.
Waxay saameyn ku yeelataa go'aamo badan.
Ku saabsan macluumaadka calaamad ahaan, waxaa lagu sifeeyey sida nooc cabir taban oo hubin la'aan ah. Waa muhiim in la ogaado in ay ku jirto aqoon dhammaystiran iyo aqoon saynis oo ah kiisas gaar ah. Fikradaha ugu horreeya ee la xiriira dhaqaalaha macluumaadka waxay la xiriireen dhaqaalaha badeecadaha macluumaadka. Dhawaan, horumar muhiim ah ayaa laga sameeyay labadaba daraasadda macluumaadka asymmetries iyo saameynta ay ku leeyihiin aragtida qandaraaska. Tan waxaa ka mid ah suurtagalnimada guuldarrooyinka suuqa.
Waxaan rajeynayaa in weedhaha Joseph Stiglitz ay u adeegeen sidii il dhiirigalin ama macluumaad ah. Waa inaan markasta u furnaano barashada waxyaalo cusub oo lagu hagaajinayo dhinacyada oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Joseph Stiglitz Xigasho
Waa maxay suuqyada maaliyadeed